Miala amin’ny fanompoana fanahy hafa, mankamin’ny fahamarinana (1)
"Aoka tsy hisy eo aminao … na mpanao fankatovana, na mpanandro, na mpanao sikidy, na mpanana ody, na manao ho masim-bava, na mpanadina amin’ny manao azy ho tsindrian-javatra." Deoteronomia 18:10,11
"… nialanareo tamin’ny sampy hiverenana amin’Andriamanitra mba hanompo an’Andriamanitra velona sy marina." 1 Tesaloniana 1:9
«Tsy ny mba hivavaka rehefa hariva no nampianarin’ny renibeko ahy, raha vao folo taona monja aho, fa ny hamantatra ny hoavy amin’ny alalan’ny karatra, sy hisikidy. Azoko lazaina ankehitriny fa fandriky ny devoly izany, ary fahavetavetana eo imason’Andriamanitra. Manjary fitaovana eo am-pelatanana hery ratsy ny tena, na dia mieritreritra hoe milalao fotsiny aza… Voafatotra sy manjary andevo.
Tsy nampoizinay fa efa tafiditra tao amin’ny fianakaviana ny fanompoana fanahy hafa, toy ny hoe nisy tranon-kala niforona tsikelikely nihodidina ahy. Indray andro anefa, raha niaraka tamina mpanandro maromaro aho, dia nahita boky nitaona ahy hanao «vavaka astrôlôjika». Dia takatro teo ny hantsana saika nivarinako. Ahoana koa no ivavahana amin’ny kintana? Koa nanapa-kevitra ny handao ireo mpanandro ireo aho. Indray hariva aho dia nanokatra Baiboly, ary sambany no namaky tao amin’ny Filazantsara nosoratan’i Jaona, ilay tenin’i Jesosy hoe: “Izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana” (Jaona 14:6). Nangorintsina aho ary latsaka ny ranomasoko. Fa nisy inona?
Sambany aho teo amin’ny fiainako no nandeha nanatrika famelabelarana tao amina fivoriana ara-pilazantsara. Nanomana ny foko ny Tompo. Novokisana lainga aho teo aloha, kanefa mazava ny hafatry ny Baiboly. Ny alahady manaraka, noho ny hetahetako hahalala ny marina, dia nandany ny tolakandro aho nametraka fanontaniana tamin’ny mpitandrina. Tonga saina aho fa izay reko teo no hany fahamarinana.»